कुन वित्तीय संस्थाको कमाइ कति ? - Naya Patrika
कुन वित्तीय संस्थाको कमाइ कति ?
फर्वार्डको नाफा १४ करोड
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा फर्वार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले रु. १४ करोड ५४ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रु. १४ करोड ६८ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । सो अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. २० करोड पुगेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४२ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोष ४१ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेर रु. ७० करोड २९ लाख पुगेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा ९ प्रतिशत बढेर रु. २२ करोड ८५ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रु. ६ अर्ब ४९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत, प्रतिसेयर नेटवर्थ रु. ४ सय ५१ दशमलव ४५ र तरलता अनुपात १७ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी भने ७२ दशमलव ७२ रहेको छ ।
हिमालयन डिस्टिलरीको १० करोड
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले रु. १० करोड ५८ लाख खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले रु. ३ करोड २८ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले उत्पादन गरेको उच्च कोटीको रोयल ट्रेजरको बिक्री अपेक्षाअनुरुप सुधार नभए पनि गोल्डेन ओकको बिक्री लक्ष्यभन्दा बढी भएको कम्पनीकाले कारोबारमा सुधार आएको हो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको वस्तु बिक्रीबाट आय २४ दशमलव ५६ प्रतिशत बढेर रु. ९५ करोड ९ लाख पुगेको छ । सो आम्दानी बढेपछि नाफा बढ्नमा सहयोग पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ३८ करोड ५६ लाख ४५ हजार रहेको छ भने जगेडा कोष रु. ३० करोड २ लाख ६३ हजार रहेको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीको कुल चालू सम्पत्ति रु. ६१ करोड ५८ लाख ३६ हजार र कुल चालू दायित्व रु. ४४ करोड ८८ लाख १५ हजार रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी रु. २७ दशमलव ४६, प्रति सेयर नेटवर्थ रु. १ सय ५६ दशमलव ८१ र प्रति सेयर कुल सम्पत्ति रु. २ सय ८ दशमलव २३ रहेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ४४ दशमलव ९८ र तरलता अनुपात १ दशमलव ३५ रहेको छ ।
सहयोगीको नाफा घट्यो
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडको नाफा गत आवको तुलनामा २२ प्रतिशत घटेको छ । बैंकले गत आवको तुलनामा कर्मचारी खर्च ५ प्रतिशत, व्याज खर्च ७० प्रतिशत र अन्य सञ्चालन खर्च थोरै प्रतिशले बढाएपछि नाफा घटेको छ । गत आवको तुलनामा खुद व्याज आम्दानी ८ प्रतिशत घटेर रु. १० करोड पुगेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा ४९ प्रतिशत घटेर रु. ३ करोड ८४ लाख पुगेको छ । बैंकले सो अवधिमा रु. ३ करोड ५ लाख खराब कर्जा संकलन गरेको छ । बैंकले दोस्रो त्रैमासमा रु. ३ अर्ब ४५ करोड निक्षेप संकलन गरी रु. २ अर्ब ८४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । जगेडा कोषको रकम १३ प्रतिशत बढेर रु. १४ करोड ९६ लाख पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
कन्काईको नाफा १७ प्रतिशत घट्यो
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कन्काई विकास बैंकले १ करोड ९१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १७ प्रतिशत कम हो । सो अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कन्काईले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १ बराबर २ दशमलव १४ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरी पुँजी बढाएको हो । बैंकको जगेडा कोष १ सय ३ प्रतिशत बढेर ९ करोड ३७ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकले ८६ लाख ९० हजार रुपैयाँ खराब कर्जा संकलन गरेको छ । यो त्रैमासमा १ अर्ब ५३ करोड २४ लाख निक्षेप संकलन गरेको यस बैंकले १ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले सो अवधिमा १ करोड ८६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सो अवधिमा निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी रु. ४ दशमलव शून्य ८ र तरलता अनुपात ४५ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।
#वित्तीय संस्थाको कमाइ